September 23, 2021, 09:09:36 PM
2021 Sep 23 16:07:49
Leno Smith: မင်္ဂလာပါ စာအုပ်တွေ ဘယ်နားက ရှာဖတ်ရမလဲခင်ဗျာ
2021 Sep 22 17:53:50
2021 Sep 22 06:31:50
Demon dragron: Hi
2021 Sep 21 21:44:34
doezat: like အရေအတွက်ကို ဘယ်မှာ ရှာ ကြည့်ရမလဲဗျ
2021 Sep 21 15:24:09
2021 Sep 21 14:12:26
၂၄ မျက်နှာ: နရသူ အစစ်ကြီးက နှလုံးမလှဖူးလေဗျာ ၊ ကဗျာဆရာ ကိုနရသူက ပိုကြမ်းပါတယ်😁
2021 Sep 21 12:36:17
loverboy2011: ဟိုင်း ...ကိုအောင်မျိုးရေ....အချစ်တက္ကသိုလ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ မှောင်မိုက်ပင်လယ်အို ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ရေးပါအုံးဗျာ....။
2021 Sep 21 11:37:08
narathu: စတာနော် အကြောင်းအရာစုံမို့ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ
2021 Sep 21 11:36:18
narathu: တကယ့်နရသူအစစ်ကြီးနဲ့ တွေ့ပြီထင်ပါရဲ့ ဟဲဟဲ
2021 Sep 21 11:35:45
narathu: အိုင်ဆေးကို၂၄မျက်နှာရေ့ နေလင်းဦးက
2021 Sep 21 11:15:06
၂၄ မျက်နှာ: နောက်တစ်ခန်းကျ မုခ်ပေါက်အကြောင်းရယ် ၊ လောကပါလနတ်အကြောင်းပါ ပါလာမှာပါ
2021 Sep 21 11:13:52
၂၄ မျက်နှာ: မြန်မာစတိုင်ဇာတ်ကြောင်းထွင်ထားတာ ၊ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးပါပဲ
2021 Sep 21 11:10:14
၂၄ မျက်နှာ: ကို@ဖိုးစား ရေ idea က ဝတ္ထုတိုအတွက် စဥ်းစားရင်းထွက်လာတာပါ ၊ parallel world story တွေက အများကြီးရှိပေမယ့်
2021 Sep 21 10:56:37
2021 Sep 21 10:56:28
2021 Sep 21 10:15:50
ဖိုးစား: ကို၂၄မျက်နှာရဲ့ဇာတ်လမ်းကကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုနဲ့တစ်ထပ်ထဲကျနေတော့ အရမ်းကြိုက်မိပါတယ်
2021 Sep 21 10:14:36
2021 Sep 21 10:13:26
ဖိုးစား: ကို၂၄မျက်နှာ parallel world ရေးဖို့ idea လေးကဘယ်လိုများရသလဲခင်ဗျ စကြာဝဌာအနန္တလို့ဘုရားဟောထားတော့ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာက
2021 Sep 21 09:50:04
၂၄ မျက်နှာ: Different world ဆိုတော့ different reality ပေါ့ဗျာ ၊ သူတို့ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ပေမယ့် easter egg လေး ထည့်ပေးထားတာပါ
2021 Sep 21 09:38:20
Htetaung2311: ၂၄ မျက်နှာ bro ရေ သန့်ဇင်ကို ကမ္ဘာ၂ထဲ သာယာထားတာပဲ နေ့တိုင်းတင်ပေးပါအုံး ဗျို့
2021 Sep 21 08:42:58
john7: welcome myatthu chris
2021 Sep 21 01:19:17
myatthu.chris: Hello guy! New member to the forum but not to the fantasy Cuckolding 😉😉
2021 Sep 20 23:58:06
2021 Sep 20 23:04:13
Zero Zero Seven: Hello
2021 Sep 20 20:37:25
jarni: ကို ၂၄ မျက်နှာက မျက်ချယ်နဲ့ သန့်ဇင်ကို ကမ္ဘာ-၂ မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဇာတ်သိမ်းပေးထားတာပဲ
2021 Sep 20 14:31:57
ကိုရီးယားကအဒေါ်ကြီး: Hi.... အဒေါ်ကြီးအသစ်ပါ
2021 Sep 20 12:13:36
Elle reo: Hi
2021 Sep 20 03:09:10
2021 Sep 20 02:21:15
2021 Sep 20 02:20:05
2021 Sep 19 22:03:18
loverboy2011: Welcome .... Lovely Honey
2021 Sep 19 21:17:22
Lovely Honey: နောက်ပိုင်းအလှတွေဘယ်မှာ၀င်ကြည့်ရမှာလဲ
2021 Sep 19 21:15:35
Lovely Honey: Hi မဂ်လာပါ
2021 Sep 19 20:56:27
jussyjame: နောက်ပိုင်းအလှလေးတွေ photo ရော၊ video ဆက်ရှင်တွေမှာရော တင်ပေးထားတယ်။ 👍အားပေးကြပါဦး 😋
2021 Sep 19 19:10:37
ကိုဒီ: ယခင်ရေးထားတာတွေလည်း လက်စသတ်ပေးပါ့မယ်။ ဒီတစ်ပတ်စာ အားလပ်ရက်မှာ
2021 Sep 19 19:10:12
ကိုဒီ: တကယ်မအားဖြစ်လို့ တောင်းပန်ပါရစေဗျာ
2021 Sep 19 19:09:48
ကိုဒီ: ဒီနေ့ည အတွက် ရေးထားတာတချို့ ချပေးပါမယ်။
2021 Sep 19 17:21:30
kyaw gyi123456: Hi
2021 Sep 19 09:08:25
bluecrazy: Free gp​လေးပါ
2021 Sep 19 09:02:29
2021 Sep 19 00:18:05
Khant lay: Mmberသစ်ပါ
2021 Sep 19 00:18:04
2021 Sep 19 00:17:52
Khant lay: Hi
2021 Sep 18 16:19:03
2021 Sep 18 13:21:58
Giovanni Lorenzo: New Member လေးပါ
2021 Sep 18 09:49:21
Bless: I am New student. Please welcome me. Thanks
2021 Sep 18 02:12:53
Sayar ki: Hi
2021 Sep 18 02:12:52
2021 Sep 18 02:12:50
2021 Sep 18 00:12:20
Janye shin: Video ဘယ်လိုတင်ရမလဲ ? မိန်းမနဲ့အခုရိုက်ထားတာလေးတင်ချင်လို့
2021 Sep 17 23:51:17
KoZen: @ MrD :
2021 Sep 17 23:40:13
2021 Sep 17 23:31:23
CCCP: New member ပါဗျ
2021 Sep 17 23:30:38
MrD: ထင်ရှားအောင် (ဘုံစံနန်း)
2021 Sep 17 23:30:08
MrD: ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ်ကွ ဘာမှတ် တစ်နေ့ငါ ဂေါင်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်
2021 Sep 17 22:37:40
KoZen: jarni ..ဒီတစ်ခါတော့ ဖြေးဖြေးပဲ ရေးနိုင်တော့မယ် bro ရေ .. အလုပ်ပြန်စနေပြီမို့
2021 Sep 17 22:05:15
jarni: Bro KoZen ဒီတစ်ပုဒ် စွဲနေပြီဗျို့ ဟီး
2021 Sep 17 22:04:34
jarni: ဘုံစံနန်းလေးက ဇာတ်လမ်းလေးထဲ မျောနေပါတယ်ဆို တခန်းရပ်တဲ့ တော်သေးတယ် နေ့တိုင်းတင်ပေးနေလို့
2021 Sep 17 22:01:19
U Naing91: https://t.me/joinchat/hRAirrvk8k1jYzQ1 ဝင်လို့မရသလိုပဲ private gp လားပဲ
2021 Sep 17 22:00:35
U Naing91: https://t.me/joinchat/hRAirrvk8k1jYzQ1
2021 Sep 17 20:54:09
Lovely Honey: New membe ပါ
2021 Sep 17 20:53:20
Lovely Honey: Hi goodnight
2021 Sep 17 18:45:16
2021 Sep 17 18:39:14
2021 Sep 17 15:24:07
2021 Sep 17 09:51:22
john7: hi ပါအားလုံး
2021 Sep 17 03:37:22
2021 Sep 16 23:34:28
Titilay: Telegram channel link အမိုက်စားတွေရှိပါတယ်ဗျ တရုတ် က အလန်းတွေပါ လင့်ကို သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာချပေးပါ့မယ်
2021 Sep 16 23:33:40
2021 Sep 16 19:55:44
ကိုဒီ: လာပါ့မယ်ဗျာ ကျုပ်လည်း သိပ်မအားဖြစ်လို့ တောင်းပန်ပါရစေဗျာ
2021 Sep 16 16:12:54
excellentjuneof: Telegram မှာ femdom group လေးတွေမရှိဘူးလားဗျ ရှိရင်link လေးတွေပေးကြပါလားဗျာ
2021 Sep 16 16:12:53
2021 Sep 16 13:47:08
2021 Sep 16 12:46:04
KoZen: @ ko ko Lu Soe .. thanks you bro.
2021 Sep 16 11:43:59
Ko Yair Min: မင်္ဂလာပါ
2021 Sep 16 07:13:35
ko ko Lu Soe: ဆရာကိုဇန်ရဲ့ အဖွင့်လေးနဲ့တင် တော်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားနေပြီ ဆရာရေ
2021 Sep 16 02:21:23
kyawnyi: ကိုဒီး 10year အလွန် ကို ဖတ်ဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျ
2021 Sep 16 01:29:49
poehatlay90: hi အားလုံး မဂ်လာပါ ခင်ဗျာ
2021 Sep 16 00:21:14
ကို NC: Hi
2021 Sep 16 00:16:55
သခင်ကြီး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hotwifecho ကြီးပြောက်နေတာ ကြာပြီနော် နေရောကောင်းရဲ့လား
2021 Sep 16 00:00:07
2021 Sep 15 23:57:56
@@lin@@##: silver moon ka positive ထိ နေတာလား
2021 Sep 15 11:08:29
Ton Ton: ေက်းေက်းဗ်ာ
2021 Sep 15 10:09:17
၂၄ မျက်နှာ: ဖတ်ရှူ့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
2021 Sep 15 10:08:52
၂၄ မျက်နှာ: ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ ၊ အလုပ်အားတဲ့ အချိန်တိုင်း ဖြေးဖြေးချင်း ရေးနေပါတယ် ၊ နည်းနည်းတော့ ကြာနိုင်ပါတယ်
2021 Sep 15 03:04:42
Michael-K: Bro ၂၄ မျက်နှာရဲ့ Parallel World အဆက်ကလေး မျှော်နေပါတယ်ဗျ။
2021 Sep 15 02:47:48
Beekyel: မင်္ဂလာပါ (Rဇာနည် လသံ ဖြင့်
2021 Sep 15 01:42:10
Omfw4: @loverboy2011 ကျေးဇူးပါ အကိုရေ
2021 Sep 15 00:34:50
ကိုဒီ: ဆရာ အောင်မျိုးတော့ သတိရမိသား ဗျာ
2021 Sep 15 00:32:02
Kyawxom: Channkoရဲ့ကျနော့်ရဲ့ပန်းချီဆရာမလေးက အဆုံးမရှိဘူးလားဗျ
2021 Sep 14 22:04:26
2021 Sep 14 18:45:52
AungOo99: တချို့ ဒေသတွေမှာ စကစက အင်တာနက်တွေစဖြတ်နေတယ် ကြားရပါတယ် အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ။ #အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
2021 Sep 14 15:39:57
Kospike: ဆရာ အောင်မျိုး မှောင်မိုက်ပင်လယ်အို ပြီးသွားပြီလားဗျ
2021 Sep 14 13:54:48
moetainlulin: ဘဝတစ်ခုရဲ့ ကန္တာရ ခရီးတစ်ခုဝယ်လားမသိဘူး cuckold ထင်တာယ် သိရင် လင်းပေးကြပါလား ပြန်ဖတ်ချင်လို့ပါ
2021 Sep 14 13:41:42
Thura779: ဒီကာလကြီးမှာ Over Sea ထွက်တဲ့လူတွေရောရှိလားဗျာ
2021 Sep 14 13:41:18
Thura779: ဘာရယ်မဟုတ် စိတ်ညစ်လို့ပါဗျာ
Total Members: 44890
Total Posts: 36654
Aung Maw Hein
Ko Ko လဂွမ်းအိမ်္(lumike)
kyaw Ye Maw
Min si thu kyaw
Moe wai aung
nhoung naung ta
ko myint thu
Ko Win Hla Than
u u nay thu
ko zayar 771
Thura Thiha Aung
ko ko Lu Soe